Hlanganisa i-typography kunye nemifanekiso ngaphakathi kwi-Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Hlanganisa i-typography kunye nemifanekiso ngaphakathi kuyo kwi-Photoshop
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Photoshop
Hlanganisa typography ngemifanekiso ngaphakathi nge Photoshop unomdla isiphumo esetyenziswa ngokubanzi kwaye kulula ukwenza kunye neziphumo ezilungileyo kakhulu enomtsalane kwinqanaba lokubonwayo. Amaxesha amaninzi siye sahlangana ziyilo apho ukuchwetheza kusetyenziswa njengesakhelo esinemifanekiso ngaphakathi, sisiphumo esiphumelelayo ukuphucula isicatshulwa kwaye uyenze ibe ngumzobo ngakumbi kwaye ibe nomtsalane.
Sebenzisa elungileyo typography, Idityaniswe nolu hlobo lwe ubuchule inikeza iziphumo ezinamandla ngokwaneleyo ukutsala iliso kule nto ubugcisa bokuchwetheza okudibanisa ukukhutshwa komyalezo ngokusetyenziswa kokuchwetheza kunye nokongezwa kosetyenziso lwe imifanekiso. Oko bekusoloko kusithiwa umfanekiso ufanele iwaka lamagama, kodwa ngesi siphumo silula siya kuba nakho ukudibanisa zombini: amagama nemifanekiso.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile bhala isicatshulwa en Photoshop, Siya kwisixhobo sokubhaliweyo, khetha ifonti kwaye ubhale into. Kuyacetyiswa ukuba typography enkulu yomzimba (ubukhulu obukhulu) ukwenza umphumo ubonakale ngakumbi. Ngaba unako Khuphela iifonti kwiwebhu Dafont.
Inyathelo lesibini yile rasterise maleko wokubhaliweyo (okanye iileya) kwaye uzijike ube ngumaleko oqhelekileyo. Nqakraza ngeqhosha lasekunene le mouse kwiqweqwe lokubhaliweyo kwaye ukhethe ukhetho lwe rasterize isicatshulwa.
Ukuba sisebenzise ngaphezulu kwesicatshulwa esinye, kunyanzelekile rasterize lonke uluhlu kunye dibanisa umaleko wokubhaliweyo kumaleko omnye. Ukwenza oku sikhetha zonke iileya (ulawulo ucinezele + ucofe kuluhlu ngalunye) cinezela iqhosha le mouse lasekunene kwaye ukhethe i-tab dibanisa umaleko.
Sidinga vula eminye imifanekiso kwiPkwihotoshop for zisebenzise ngaphakathi kwindawo yokubhalela. Sivula imifanekiso yethu kwaye sihlengahlengisa isicatshulwa ngendlela yokuba ibekwe apho sifuna ukuba ibonwe kubuchwephesha. Kuyacetyiswa ukuba ubeke umaleko wokuchwetheza ngaphezulu komaleko womfanekiso, ngale ndlela sinokubona ngcono ukwakhiwa.
Inyathelo elilandelayo lelona libaluleke kakhulu kuba lijongene nokufezekisa isiphumo esisilindeleyo, kufuneka silandele la manqaku:
Cofa kumaleko wokubhaliweyookanye ude ubone ulwandlalo lobuchwephesha (lawula + cofa kumaleko)
Khetha (ngaphandle kokucofa) umaleko womfanekiso.
Yiya kukhetho umaleko omtsha ngekopi.
Oko sikuphumeleleyo ngala manyathelo kukuxelela Photoshop sifuna ukwenza ifayile ye- Uluhlu ngokukhetha typography kodwa ukukopa umaleko esiwukhethileyo, ndithetha ukukopa kuphela umfanekiso. Xa ukhetha ifonti, Photoshop isenzele ukhetho nge ifom yoonobumba.
Emva koku kuya kufuneka sibenethu Isiphumo esimangalisayo igqitywe tu.
Sicima wonke umaleko wokubhaliweyo okanye ngokulula (njengakwimeko yam) siyazicima ezo mibhalo singazifuniyo. Singasebenzisa irabha ye Photoshop okanye susa umaleko ngokupheleleyo.
Las amathuba kolu hlobo lweziphumo zi engenasiphelo kwaye baxhomekeke kuphela kubuchule bethu bokusebenza xa usebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Hlanganisa i-typography kunye nemifanekiso ngaphakathi kuyo kwi-Photoshop
Leliphi ixabiso leelogo ezaziwa kakhulu
Uyila njani ilogo elungileyo, amanqaku asisiseko